Akhriso: Nuxurka war-murtiyeed laga soo saaray shirkii IGAD ee Jabuuti – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Akhriso: Nuxurka war-murtiyeed laga soo saaray shirkii IGAD ee Jabuuti
Allhadaaftimo December 21, 2020 Uncategorized
Marka la eego qeybta Soomaaliya khusaysa war-saxafadeedka kasoo baxay shirkii IGAD ee Jabuuti ka qabsoomay, waxaa aad looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalku galayo sanadkaan dhamaadka ah iyo kan soo socda ee 2021-ka.
Waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka, “ Waxaa lasoo dhawaynayaa sida Soomaaliya ugu diyaar garoobayso doorashooyinka 2020 – 2021-ka, ayadoo la raacayo habraacii heshiiskii ay bishii September wada gaareen dawladda federalka iyo madaxda dawlad goboleedyada.”
War-murtiyeedka IGAD ayaa intaas ku sii daray, “Waxaa muhiim ah oo loogu baaqayaa dawlada iyo dawlad goboleedyada, in la qaado tilaabooyin lagu fududeynayo in doorashadu si xasiloon u dhacdo, ayadoo la xalinayo khilaafka jira ee dhanka doorashadda la xariira aadna loo ixtiraamo heshiisyadii Dhuusamareeb lagu gaaray 17-kii September 2020, si doorashadu waqtigeeda ugu dhacdo.”
Sidoo kale bayaankan waxaa lagu bogaadiyay dadaalka lagu bixiyay dib u habaynta iyo diiwaangelinta ciidamada Soomaaliya iyo taageerada AMISOM si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ugu dambeyn qoraalka kasoo baxay shirkii IGAD ayaa lagu yiri “Waxaa lasoo jeedinayaa in lasii wado wadahadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana la amaanay doorka ay fududeynta wadahadalladaan ku leeyihiin dawladaha gobolka.”
Bayaanka ayaa lagu soo hadal qaadin, sida laga yeelay khilaafka dhanka diblomaasiyada ah ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ajanadaha shirkaan ku jiray, aadna loo filayay in lagu soo hadal qaado
Previous Wafti Uu Hogaaminayo Wasiirka Tamarta Iyo Macdanta Soomaliland Oo Booqdey Goob Dahab Laga Haley
Next Senator Mustaf Qorax oo xubin ka ahaa Aqalka Sare oo Hargeysa iska dhiibay